राजसंस्थाले पहिला पनि एकता खोज्या हो, लोकप्रियता होइन: हिन्दु राष्ट्र कायम हुनु पर्ने पुर्वराजाको सङ्केत::Pathivara News
राजसंस्थाले पहिला पनि एकता खोज्या हो, लोकप्रियता होइन: हिन्दु राष्ट्र कायम हुनु पर्ने पुर्वराजाको सङ्केत
नेपालमा गणतन्त्र आएपछि राजगद्धी छाड्न बाध्य भएका अन्तीम शाहबंशीय राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्धी छाडे तापनि उनको सानो भ्रमण पनि अखबारको मुख्य शीर्षक बन्न छाडेको छैन । त्यसका अतिरिक्त देश तथा बिदेशका मन्दिरहरुमा पूजा गर्दै हिड्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र देशका विभिन्न भागहरुमा भ्रमणमा निस्किन्दा “राजा आऊ देश बचाऊ”- भन्ने ध्वनि गुन्जिन छाडेको छैन । के यो नेपाली जनताको आफ्नो पूर्व राजाप्रतिको असीम लगाव वा प्रेम हो कि बास्तवमै जनताको आह्वान बमोजिम नै मुलुक त्यो मोडमा पुगिसकेको हो त् ? यस्तै दृश्य पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले २०६७-२-११ गतेका दिन नेपालगन्जको बागेश्वरी मन्दिरमा पुगेर दर्शन एवंम पूजा गदा पनि देखियो जसको भिडियो हिजो जेष्ठ ६ गते इमेज च्यानलले युटुबमा अपलोड गरेको छ । राजा आउ देश बचाउका गगनभेदी नारा लगाई रहंदा ज्ञानेन्द्र शाह स्मित मुस्कानसहित सर्ब साधारणबाट पुष्पगुच्छा ग्रहण गरिरहेका थिए ।
उक्त भ्रमणमा संगै गएको टेलिविजन च्यानल इमेजले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसंग कुराकानी सुरुगर्दै तपाईलाई के भनेर सम्बोधन गरौँ, पूर्व राजा, भावी राजा, उद्योगपति वा एक सर्बसाधारण नेपाली नागरिक भनेर प्रश्न राख्दा पूर्व राजा शाहको जवाफ यस्तो रह्यो :-
म सर्बसाधारण नेपाली हुँ । नेपालमा बसेको छु र नेपालीहरुकै सेवा गर्ने इच्छा हो । सर्बसाधारण नेपाली दाजुभाइको जस्तो दिनचर्या हो मेरो पनि त्यस्तै हो । फरक के होला भन्देखि धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दैन, आफूसंग धेरै समय छ भने । जीवन भनेको केवल गुलाफको फूल मात्रै हैन त्यहाँ काँडा पनि हुन्छ तर त्यो काँडालाई पनि नदुख्ने बनाउन सक्नु जीवनको एउटा माने हो । म बिहान छ्बजेतिर उठ्छु, पाठ गर्छु, नातिनातिनाहरू भएको बेलामा उनीहरु स्कुल जानु अगाडी केही समय बिताउछु अनि मान्छे भेट्छु । ती मान्छे भेट्ने क्रममा दिग्गज पनि हुन्छन, सर्ब साधारण पनि हुन्छन, विभिन्न विचारका मान्छेहरु पनि हुन्छन । सबैलाई धैर्यताका साथ् सुनिदिने म गर्छु । प्राय:जसो १२ बजेपछि लन्च खान्छु, त्यसपछि सक्योभने म अलिकति रेस्ट लिन खोज्छु,आफ्नो शरीरलाई अलि रेस्ट दिएर ५-६ बजेतिर मान्छे भेट्न थाल्छु. अब त्यो भेटाइ नौ बजेसम्म पनि हुन्छ, दश बजेसम्म पनि हुन्छ । सकेसम्म रातिको खान सिम्पल, लाइट खान खोज्छु । नागार्जुन बस्दा कुकुर लिएर हिड्ने ठाउँ धेरै छन्, कुकुरलाई पनि एक्सरसाइज हुने मलाइ पनि एक्सरसाइज हुने ।
सोसिअल लाइफ एउटा हुनै पर्छ, कतिपय त्यस्ता साथी छ नभएको हैन । फेरी त्यो हामी भेट्ने बित्तिकै गहिरो र गाह्रो पोलिटिक्सकै कुरा हुन्छ भन्ने हैन, रमाइलो गर्न पनि जान्नु पर्छ, रमाइलोमा मात्तिनु हुन्, नमात्तिएर पनि धेरै रमाइलो गर्न सकिन्छ । नेपालीपन पनि त्यो हो ।
राजसंस्थाले पनि कहिलै त्यो पपुलारिटी खोज्या हैन, राजसंस्थाले त पहिला पनि युनिटी खोज्या हो !
राजा ज्ञानेन्द्रको पार्टी यो वा त्यो भन्ने पनि एउटा भ्रम हो । उहाँहरु(राप्रपा)ले एउटा सिद्धान्त बनाको छ, त्यो बनाउँदैमा हाम्रो संगत छ भन्ने भ्रम हैन, के लाग्यो भन्देखि मलाइ त्यसो भए धेरै अगाडिदेखि राजनीतिमा लाग्थ्यौं कि हामी ? त्यतातिर हाम्रो मनै गएन, अहिले पनि त्यतातिर जाने हाम्रो मन छैन ।
यो सो कल्ड सम्झौता धेरै बाहिर आइसक्या छ, अहिले अब मेरै मुखबाट निकाल्नुपर्ने भन्ने सान्दर्भिक छैन भन्ने लाग्यो । यो धेरै पत्रपत्रिकामा आइसक्या कुरा हो, भाको कुरा धेरैले लेखेकै छ, धेरै नेपालीले यो कुरा बुझ्या पनि छ । त्यसैले म अहिले सुन्छु बैशाख ११ को कुरा, ८ गतेको कुरा, त्यो कुरा चै फेरी एकचोटी दोहर्याउनु पर्छ र नेपाली जनताले विचार गर्नु पर्छ । त्यो नेपाली जनतालाई छोदिदिउ, त्यो हामीले भन्ने कुरा हैन ।
राजसंस्था र हिन्दु राज्यको पुनर्स्थापनाको कुरा मैले भन्ने हो र ? तपाइले नै भन्नु भयो मैले त्यो छाडेर पन्छिन पाउदिन भनेर, तर बास्तबिकता त त्यो हो नि, जनताले नै सबैलाई सुसूचित र टाठो बनाई दिनु पर्यो यो कुरामा र ८० प्रतिशतभन्दा बढी एउटा धर्ममा बिश्वाश गर्नेलाई पन्छ्याई दिएर कसै न कसैको मन त दुखेको होला । त्यो कसरी अब सम्बोधन गर्ने ? अहिले भएका नेताले विचार गर्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
एउटा सर्बसाधारण नेपाली मन्दिर जान नहुने ? जहिले पनि जान पाउनु पर्छ, र उसलाई लागेको कुरा उसको पनि केही न केही हक अधिकार त् छ नि बोल्नलाई । जनकपुरमा मैले एउटा कुरा गरेको थिए, कतिपय सर्बसाधारणले मलाई आएर सुनाएको कुरा, त्यो समयमा भन्या हो. अब के भन्ने, त्यहाँ पनि मलाई कतिले दीवास्वपन देख्न लाग्या छ, धमिलो पानीमा माछा मार्न लाग्या छ पनि भने । अब यस्तो कुरा उहाँहरुको पनि भन्ने अधिकार नै हो । नेताहरु भएपछी, मलाइ कस्तो लाग्छ भने बोल्नु त उहाँहरुको अधिकारै छ,सुन्नु उहाँहरुको कर्तब्य हो, सुन्नु पनि सक्नु पर्छ अरुले भनेको, त्यसैले ती कुरा मैले भनेको हैन सर्ब साधरणले व्यक्त गरेका हुन्, ती कुरा मैले भनेको भन्दा पनि यस्तो पनि कुरा आएको छ है भनेर मैले व्यक्त गर्न पाएको कुरा हो ।
राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा सुन्दा कस्तो लागिरहेछ भनेर सोद्धा- उक्त प्रश्नलाई पूर्णत: पन्छाउदै उनी भन्छन- गर्मीको अनुभव भैरहेछ , नेपालगन्ज आएर जाडोको अनुभव कहाँ हुने त्यो पनि यो मौसममा । त्यसैले तपाईहरुलाई पनि धन्यबाद भन्नै पर्छ, किनकि मैले पसिना चुहाएर हिंन्दा तपाईहरुले पनि त्यही गर्नु भाछ । त्यो भन्दा पनि सर्ब साधारणले व्यक्त गरेको माया ममता जुन तपाइहरुले पनि अनुभव गर्नु भयो, कतिपयले छुनै पर्ने, कतिपयले फूल दिनै पर्ने यो त् खै के भन्ने, एउटा कुरा म प्रष्ट पार्न खोज्छु, राजसंस्थाले पनि कहिलै त्यो पपुलारिटी खोज्या हैन, राजसंस्थाले त पहिला पनि युनिटी खोज्या हो सबैलाई एकै ठाउँमा होस् भन्ने । अहिले पनि म त्यही देख्छु । कुन चै जातका, कुन लिंगका, मैले त केहि फरक नै देखिन , मैले त सबै नेपाली देखे त्याहाँ त।
राजसंस्था गएको बिषयलाई लिएर आई फिल लिट्टल स्याड नट गिल्टी । बिकाउज मेनी थिंग कुड अवोईडेड समथिंग आई फिल आइ वाज ट्रेड अदर्स आई फिल द्याट द पिपुल ह्याव द एक्स्पिरियेंस अन्डरस्ट्यान्ड द रियल इम्प्याक्ट अफ दोज एक्सनस् ।
राजसंस्था जानुमा विशेषत: तपाइको परिवार र पारसलाई दोष दिईन्छ नि भनेर सोद्धा उनी भन्छन- यो कसैलाई दोष दिएर पन्छ्याउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । परिवारको मुख्य मान्छे भएपछी गुण अवगुण सबै लिन सक्नु पर्छ । अरुलाई औंलो ठड्याउने हाम्रो बानी छैन……. अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक कुरा नगरौं ।
राजा बिरेन्द्रको बंश नै नाश हुने गरी भएको नर संहारमा अमेरिका, भारत र तपाइको हात छ भन्ने चर्चा छ भन्ने प्रश्नामा पूर्ब राजा ज्ञानेन्द्र भन्छन- खै मलाइ त कुनै प्रमाण आएको छैन । जुन आयोग गठन भएको थियो उहाँहरुले पनि यस्तो कुरा गरेको छैन । त्यसैले मैले अहिले यसमा बिश्वाश गर्छु वा गर्दिन भन्न सक्दिन ।
पूर्व राजाको हैसियतले नागार्जुन दरबारमा केही पनि सुबिधा दिईएको छैन, तपाइले ब्ल्याक आउट भोगिरहनु भएको छ भने मैले पनि भोगेको छु. पानी आउँछ त्यो मैले पनि तिरिराखेकै छु । मेरो निजि निवास निर्मल निवासमा छोरा, बुहारी, नातिनितानालाई राख्या छु, सर्ब साधारणले जस्तै कर तिरेको छु ।
मलाई धेरै ठाउँबाट बोलाईरहेका छन्. धार्मिक स्थानमा अईदियोस भन्ने छ ।हेर्दै जाउँ कहिले मौका मिल्छ, जनतामाझ जान मलाई कहिलै अप्ठ्यारो थिएन र अहिले पनि छैन, ब्यबस्था मिले पछी जाने कोशिश गर्छु ।